ကျွန်တော်တို့၏ မူဝါဒ | တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း
ကျွန်တော်၏ website ကို အစဥ်တစိုက်အားပေးကြတဲ့ ချစ်ရပါသော မြန်မာပြည်သူပြည်သား အပေါင်းအား မင်္ဂလာပါလို့ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားစုများနှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံများ အတူနေထိုင်လျက်ရှိသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအချင်းချင်းတို့၏ မတူကွဲပြားမှုများကို လေးစား လက်ခံခြင်းဖြင့်နှင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုင်းပြည်သည်လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မှီကာလ၏ အရေးကြီးဆုံးသော အမျိုးသားညီလာခံသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဥပဒေလိုအပ်ချက်များကို ရေးဆွဲသက်မှတ်ရာတွင် အထောက် အကူ ပြုရန်ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ တွင်ကျင်းပခဲ့သော ပင်လုံညီ လာခံ (ဗဟိုအစိုးရနှင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများအကြား ဆက် ဆံရေး) သည် အလွန်ပင် သိသာထင် ရှားခဲ့ခြင်ဖြစ်သည်။ ယင်းညီလာခံ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဥပဒေမူများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရန် မဟုတ်‌ခြေ။ နယ်စပ်ဒေသရှိ ဗမာလူမျိုး မဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများသည် ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရနေသောဗမာလူမျိုးများနှင့် အတူတူ ပေါင်း၍နေမည်လော? သို့မဟုတ် ကိုလိုနီနယ် ချဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ဆက်လက်နေကြမည်လော? ဟူသော ပြည်ထောင်စုအ တွက် သဘောတူညီချက်များကို အဓိကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အရေးကြီး ဆုံးသော ဦးစားပေးအချက်မှာ လာမည့်ပြည်ထောင်စု အစိုးရသစ်အား ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်နိုင်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရားဝင်နေထိုင်ကြသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် (နိုင်ငံတိုင်းတွင် ထားရှိသော စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် နိုင်ငံသားစည်းမျဉ်းများ) မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘများမှ ဆင်းတက် မွှေးဖွားလာပြီး တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြသော မြန်မာနိင်ငံသားလူမျိုးစုများ အားလုံးပါဝင် ကြသည်။
လွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံသဘောတရားမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားကို ပထမအဆင့် နေရာတွင် ဦးစားပေးရန် ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသားယဥ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တို့အား ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ဓာတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်ရှိနေရန် ပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မြန်မာလူမျိုးစုများ အားလုံး၏ အခြေခံသွင်ပြင် လက္ခဏာပင် ဖြစ်သည်။ ဤအယူဝါဒသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အယူဝါဒနှင့် တူညီကြ၏။ အမေရိကန်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပြောင်းရွှေ့အခြေချ နေထိုင်ကြ သူများနှင့် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အတွက် အ‌ရေးကြီးဆုံးသောအချက်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအား ပထမနေရာတွင် ဦးစားပေးထားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးမတိုင်မှီ ၁၉၄၇ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ၏လွတ်လပ်ရေးဖခင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်သီး နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များ လုပ်ကြံခံခဲ့ရ၏။ သို့သော်ယင်းနောက်တွင် ကပ်လျက် လိုက်ပါလာ သောနိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဦးနုသည် လာမည့်ပြည်ထောင်စု အစိုးရသစ်အား ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရန် မရည်ရွယ်ခဲ့ပေ။ ဦးနု၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော အုပ်ချုပ်မှုပုံစံသည် အာဏာအား အစဉ်အမြဲချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ရန်နှင့် သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အစီအစဉ်များအား ဖြည့်ဆည်းရန် ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အဆချက်မှာ အခြားဌာနေတိုင်းရင်းသားများအပေါ်သို့ လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးနိုင်သော ဗမာဖြစ်ရန်နှင့် လူအများစု ဖြစ်နေသော တိုင်းရင်းသား ဗမာတို့ ၏ မဲများအား ရရှိနိုင်ရန် နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာ အဖြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာရေးအား အသုံးချခဲ့ သူလည်းဖြစ် သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ၁၉၆၁ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲမှ အနိုင်ရလာသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ် ဦးနုက တရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သူသည် မိမိသေဆုံးသည့်အထိ ဘုရားတရား မဲ့သူများ ထံမှ နိုင်ငံရေးအရ လိုအပ်သလို မကြာခဏ ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရရန် မျှော်လင့် နေခဲ့သည်။
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် ဦးနုသည်အိမ်စောင့် ဝန်ကြီးချုပ် (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ မေးခွန်းထုတ်စရာတစ်ချက်) အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် နောက်တဖန်ပြန်လည် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားခြင်းခံရသော အရည်အချင်းမရှိသည့် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုထံမှ အာဏာကို ပြန်လည် ရယူရန် အလွန်စိတ်အားထက်သန် လာခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်မှုအပိုင်း၌ ကျွမ်းကျင်မူ ချို့ယွင်းနေသော ဦးနုသည် မိမိ၏နိုင်ငံရေးပါတီမှ နိုင်ငံရေး လက်တွဲ ဖော်များနှင့်အတူ ဖြေရှင်းလို့မရသော ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရာမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းအား ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့၍ အာဏာသိမ်းယူ စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုသည်လည်း အဆိုးရွားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် နေဝင်း၏ နိုင်ငံရေး အုပ်ချုပ်မှု လမ်းစဥ်မှာ ကြမ်းတမ်းကြောင်းကို နေဝင်း အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှသာလျင် သဘောပေါက်လာခဲ့ရသည်။ နေဝင်းသည် အတုယောင်ဆောင်သော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအားဖော်ဆောင်ရာတွင် တိုင်ပြည်၏ စီးပွားရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ပညာရေးစသည်တို့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများစွာကျရောက်မည်ကို ဂရုမပြုဘဲ ဆိုရှယ်လစ်အတုအယောင်များဖြစ်သော စစ်မှန်သော အာဏာရှင်စနစ်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ဦးနု၏ ဗမာကို ပထမနေရာတွင် ဦးစားပေးသည်ထက် နေဝင်းသည် စစ်တပ်အား ပထမဦးဆုံးအဆင့်သို့ မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအားအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာ စစ်တပ်ကိုပထမနေရာတွင် ဦးစားပေးခြင်းသည် ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့လေသည်။ ဤဇာတ်ကောင် နှစ်ယောက်စလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးလောကထဲမဝင်ခင်၌ပင် ကိုလိုနီများကငှားရမ်းအသုံးချခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် လွတ်လပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ တန်ဖိုးများရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အပေါ်ယံသဘောပေါက် နားလည်ရုံမျှသာဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လုံးဝမထိုက် သင့်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကံမကောင်းစွာ ဖြင့် ၎င်းတို့ နောက်တွင် လိုက်ပါလာကြသော လက်အောက်ငယ်သားများသည်လည်း မှားယွင်းသော နည်းစနစ်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြာမှု(Culture Disorders) များအား အစွမ်းကုန်ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။ ဤသို့ အင်မတန် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ကြသော ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ အတွက် ဝင်းလင်းတောက်ပသော အနာဂတ်အား မဖန်းတီးနိုင်ခဲ့ကြပေ။
"မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်" အား လက်ခံသူများအားလုံးအတွက် ဤ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသစ်အား ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဓိပ္ပါယ်နက်ရှိုင်းပြီး အောင်မြင်သော မဟာဗျူဟာအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် စဥ်းစားတွေးခေါ် နိုင်စွမ်းရှိသော မြန်မာပြည်သူလူထုများကို အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဗဟုသုတများဖြင့် ပညာပေး မျှဝေပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ မစ်ရှင် Mission သည် တိုးတက်သောယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း၊ တိုးတက်သော အစိုးရစနစ်အကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော တိုးတက်သည့် ရည်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရန်အတွက် အရေးကြီးသော စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအား မြှင့်တင်ပေးမည့် ဆောင်းပါး များဖြင့် စတင်ပါမည်။ လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် စဥ်းစား တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသော ပြည်သူလူထုများ အနေဖြင့် မှန်ကန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ရွေးချယ်မှုများ ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွန်ပေးစေလိုပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူဤ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များထက် ကျော်လွန်၍ မြန်မာပြည်သူလူထုများကို ကျွန်ုပ်မှအစေခံရန်နှင့် တိုးတက်သော မြန်မာနိုင်ငံသစ်ကို ဖော်ဆောင်ရှာဖွေရာတွင် ဆက်လျှက် လမ်းညွန်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အခြေခံ မူဝါဒများ
သင့်တင့်သောကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရပြည့်ဝသော အစား အစာများ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လျောက်ပတ်သောအမိုးအောက်တွင်နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ အဆင့်ရှိသော ကောလိပ် များနှင့် တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသောအလုပ်၌ အလုပ်ခန့်ထားနိုင် ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော အငြိမ်းစား ရယူနိုင်ခြင်းအတွက် သင့်တင့်သော ငွေအား စုဆောင်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသည်တို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ် ပြောင်းလဲမူရှိသော ယခုခေတ် လူသားဆန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် ကျွန်တော်တို့၏ အခြေခံ မူဝါဒများသည် အောက်ပါအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
မိသားစုနှင့်သက်ဆိုင်သော အစီအစဉ်များအတွက် ပန်းတိုင်များ -
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စိတ်ဓါတ် ရေးရာဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
ကောင်းမွန်သော လေ့လာမှု အလေ့အထများ နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျင့်ဝတ်များကို မြှင့်တင် ပေးခြင်း၊
မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
မနှစ်သက်ဖွယ်ဇာတ်ကောင်များကို ထိထိရောက်ရောက် ခုခံကာကွယ်ရန် (သို့) ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ပညာပေးခြင်း၊
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းစေသော အချက်များနှင့် ယုံကြည်မှုများ အားလုံးကို တုံ့ပြန်ခြင်း (သို့) ငြင်းပယ်ခြင်း၊
လူမှုရေးစီမံကိန်းများအတွက် ပန်းတိုင်များ -
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းမှု ကောင်းမွန်စေရန် မြင့်တင်ပေးခြင်း၊
မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်း၊ တာဝန်ယူမှုနှင့် လှုံ့ဆော်မှုများကို တန်ဖိုးထား တက်သော ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊
အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို တန်ဖိုးထားသောယဉ်ကျေးမှုကို တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊
စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမူစရိတ် နည်းသော ပြည်သူ့အိမ်ရာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၊ လက်လီဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ပညာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် လူမှုရေးတန်းတူညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရေး WIN-WIN အတွေးအခေါ် စိတ်ဓါတ် မြင့်တင်ပေးခြင်း၊
ဘုံယဉ်ကျေးမှုကို စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ တည်ထောင်ပေးခြင်း၊
စီးပွားရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပန်းတိုင်များ -
ခေတ်မှီတိုးတက်သောစီးပွားရေး ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင် သော အဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ပေးခြင်း၊
အလယ်တန်းကျောင်းမှစပြီး အခြေခံစီးပွားရေးသဘောသဘာဝကို သင်ကြားပို့ချပေးသော ပညာရေးစနစ် တည်ထောင်ပေးခြင်း၊
အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးကျောင်းများ တည်ထောင်ပေးခြင်း ၊
ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ စီးပွားရေးသဘောသဘာဝကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် တိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊
စီးပွားရေးတိုးတက်မူတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ မှပါဝင်သောမြို့များ တည်ထောင်ရန် အတွက် မြို့တစ်မြို့ချင်းစီကို ကူညီပေးခြင်း (ဥပမာဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှုကဲ့သို့)
စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ လျှော့ချခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဖျက်သိမ်းပေးခြင်း ၊
အာမခံထားသည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်ကို တည်ထောင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများကို ကာကွယ် ပေးခြင်း၊
အစိုးရရုံးတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများအား မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊
လက်ရှိအစိုးရ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်သော တရားစီရင်ရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို အခြေခံ၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
(နိုင်ငံရေးပါတီ ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် စနစ်အပေါ် အခြေခံ၍)အုပ်ချုပ်မှုအဆင့်အားလုံးတွင် ထိရောက်သော နိုင်ငံရေး တန်းတူညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
အဓိကအခက်အခဲများ၏စွမ်းရည်မျှတမှုကို အခြေခံ၍ အစိုးရစနစ်တစ်ခုကိုမြှင့်တင်ပေး ခြင်း၊
ဘာသာတရားအား သီးခြားခွဲခြားထားသည့် ဘာသာမဆွဲသည့် အစိုးရတစ်ရပ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
စိတ်ဓါတ်ရေးရာနှင့် သီးခြားခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော အစိုးရစနစ်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊
ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ထူးချွန်သူများကို အားပေးခြင်းနှင့်ဆုချခြင်း၊
မိသားစုလိုက် စုဆောင်းထားသည့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့် ကောင်းကျိုးများကို ကောင်းမွန် သောအခွန်စနစ်ဖြင့် ဥပဒေများမှတစ်ဆင့် နောက်မျိုးဆက်သို့ လွှဲပြောင်းပေး အပ်ခြင်း၊
နိုင်ငံရေးစနစ် သုတေသနဌာန တည်ထောင်ပေးခြင်း၊
မှန်ကန်သော သမာဓိတရား SAMADHI ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများသည် လိုအပ်သော ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိ ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။